सहमतिको सपना समुन्नत समाज : सुवेदी
By vijayafm on	 December 26, 2019 अन्तरवार्ता, विविध खबर
समुदाय र मानवता विकासका लागि प्रतिबद्ध संस्था सहमति जनताका आधारभूत अधिकारहरुको सुनिश्चितताका लागि क्रियाशील छ । गुणस्तरीय जीवनयापनमा समुदायको स्रोतमाथि पहुँच अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ २०५८ सालमा स्थापना भएको सहमतिले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । सहकारी संस्थाको प्रवद्धृन, महिला सशक्तीकरण, जीविकोपार्जन, अमिलो जातका फलपूmलहरुको बजार व्यवस्थापनलगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । सामाजिक विकासमा क्रियाशील गैंडाकोट ५ रहेको सहमतिको साधारणसभा तथा अधिवेशनले अध्यक्षमा करुणासागर सुवेदीलाई चयन गरेको छ । यसै सन्दर्भमा सहमतिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष करुणासागर सुवेदीसँग सहमतिको अबको योजनाका विषयमा कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ विजय खबरका लागि तिलक सुवेदीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
सहमतिको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ, यहाँको अबको सोच के हो ?
सहमति समुदाय र मानवता विकासमा प्रतिबद्ध सामाजिक विकास संस्था हो । निरन्तर हामी यो अभियानमा लागिरहन्छौं । हाल नेपालमा गैससहरूप्रतिको बुझाइ र दृष्टिकोण सरोकारवालाहरूमाझ भिन्न भिन्न रहेको छ । सहमति संस्थाको विगत, वर्तमान र भविष्य हेर्दा हामी गैरसरकारी क्षेत्रलाई समाज र राज्यको विकास साझेदारका रूपमा स्थापित भएको देख्न र तदनुसारको भूमिकामा अगाडि बढाउन चाहान्छौं । हामी गैससमार्फत यस अभियानलाई स्थापित गर्न लाग्नेछौं । अनि सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको शान्ति, समृद्धि, सुशासन र खुसियालीका लागि सहमति अगाडि बढ्नेछ ।
यहाँको सोच र संस्थाका नीति तथा कार्यक्रमबीच केकस्तो अन्तर्सम्बन्ध छ ?
मेरो सोच, संस्थाको सोच, समाजको सोच र राष्ट्रको सोचमा ताŒिवक भिन्नता छैन । हामी त्यही सोचलाई संस्थाको विधान, नीति तथा कार्यक्रममा समाहित गरेर अगाडि बढेका छौं । खुसियालीसहितको समुन्नत र स्वावलम्बी समाज हाम्रो सपना हो । त्यस दिशातर्फ निरन्तर दत्तचित्त भएर स्वार्थभन्दा माथि उठी मन, वचन र कर्मले राष्ट्रको सेवा गर्ने हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम हुनेछ ।
संस्थाको आगामी बाटो के हो ?
सुशासन, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक खुसियालीसहित समाजको समृद्धि, जवाफदेही र उत्तरदायी समाज, शान्ति, विकासमा सहकार्य, अपसी मेलमिलाप र एकता नै सहमतिको मार्गचित्र बन्नेछ ।
सहमतिले नवलपुरको विकासका लागि चौधरी फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा ‘नवलपुरको बृहत्तर विकास योजना’ पुस्तक सार्वजनिक गरेको थियो । यसको कार्यान्वयनका लागि के गर्दैहुनुहुन्छ ?
चौधरी फाउन्डेशन नेपाल, सहमति संस्था र जिल्ला समन्वय समितिबीच जिल्लामा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, माननीय सभासदहरू, स्थानीय सरकारका प्रमुख एवं जनप्रतिनिधिहरू, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, विकासविद्, विषयविज्ञहरू, प्रशासन तथा कर्मचारी मिलेर नमुना नवलपुर जिल्ला विकास योजना, २०७५ तयार भएको सर्वविदितै छ जसमा नमुना नवलपुर जिल्लाको सपना कोरिएको छ । यो हामी नवलपुरवासीको गौरव र खुसीको दस्तावेज हो । यो कतै हराएको छैन र कार्यान्वयनको कार्यकारी जिम्मा हामी सबैमा छ । जिल्ला समन्वय समिति, नवलपुरमा यसको सचिवालय छ । अनि सोही दस्तावेजमा टेकेर जिल्लाको तहगत एवं समग्र विकासका योजनाहरू अगाडि बढेका छन् । सबै पालिकाहरूको छुट्टाछुट्टै विकास योजनाका खाकाहरू पनि दस्तावेजमा समेटिएका छन् साथै समग्र नवलपुरको विकास परिकल्पनाअनुसारको मार्गचित्र पनि छ । सहमति संस्था र चौधरी फाउन्डेसन नेपालले दिएको जिम्मेवारीअनुसार त्यस दस्तावेजको तयारी कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको र अहिले सहमति संस्थाको नेतृत्वमा अएका हिसाबले नमुना नवलपुर जिल्ला विकासको अभियानमा मेरो अनि सहमति, चौधरी फाउन्डेसन नेपाल एवं जिल्ला समन्वय समितिलगायत सम्पूर्ण विकास साझेदार समूहको अहम् भूमिका हुनुपर्छ । म सहमति संस्थाका तर्फबाट त्यस दिशामा कुशल सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध रहनेछु ।